आज मंगलवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ माघ ६ गते - Candles Khabar
गृहपृष्ठ आज मंगलवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ माघ ६ गते
आज मंगलवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ माघ ६ गते
श्रीगणेशाय नमः ।। आज विक्रम संवत् २०७७ साल माघ महिनाको ६ गते तदनुसार ईशवीय सन् २०२१ अन्तर्गत जनवरी महिनाको १९ तारिख, सोमवार हो । सृष्टिदेखि हालसम्म १,९५,५८,८५१२१ वर्ष व्यतीत भइसकेका छन् । कलिकालको ५१२१औँ वर्षअन्तर्गत श्री शालिवाहनीय शाके १९४२, तथा नेपाल संवत् ११४१ अन्तर्गत प्रमादी नामको संवत्सर चलिरहेको छ ।
सूर्य उत्तरायणमा छन् । शिशिर ऋतुअन्तर्गत पौष शुक्लपक्षको षष्ठी तिथि बिहान ११:४८ बजेसम्म रहनेछ । यो महिनाका देवता माधव र मासदेवी रुक्मिणी हुन् । सूर्य मकर राशिमा र बृहस्पति मकर राशिमा रहेका छन् । उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र बिहान ११:७ बजेसम्म रहनेछन् । यसैगरी आज शिव योग र तैतिल करण रहेका छन् । आज सूर्योदय बिहान ६:५७ मा छ भने सूर्यास्त बेलुका ५:३३ बजे हुनेछ । चन्द्रमा आज मीन राशिमा रहेका छन् ।
आज मंगलवार गणेशजी एवं हुनमानजीको उपासना शुभ रहनेछ । यसैगरी आज गणेशजीलाई राता वस्तुका साथै दुवो एवं लड्डुको अर्पण शुभ फलदायी रहनेछ ।
आजको राशिफल २०७७ माघ ६ गते, मंगलवार
मेष राशिः चन्द्रमा आज प्रतिकूल रहनेछन् । खर्चमा वृद्धि हुनुका साथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहनसक्ने देखिन्छ । विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ ।
वृष राशिः प्रेममा पारख बढ्नेछ । व्यवसायिक सफलता प्राप्त हुनुका साथै सुखद् यात्राका योग पनि देखिन्छन् । शत्रुपक्ष दुर्वल रहनेछन् ।
मिथुन राशिः बौद्धिक कार्यमा मन जानेछ । बोलीमा ओज रहनुका साथै कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न देखिन्छ । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ ।
कर्कट राशिः व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । बौद्धिक कार्यमा मन जानुका साथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् । विद्याको क्षेत्र आज मध्यम फलदायी रहनेछ ।
सिंह राशिः कार्यक्षेत्रमा संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । चन्द्रमाको प्रतिकूलताले गर्दा खर्चमा पनि वृद्धि गराउनसक्ने देखिन्छ । प्रेम जीवन मध्यमफलदायी रहनेछ ।
कन्या राशिः पराक्रम बढ्नेछ । मित्र लाभ हुनुका साथै आर्थिक उन्नतिका योग पनि देखिन्छन् । परोपकारी कार्यमा विशेष लागव रहनसक्नेछ ।
तुला राशिः मित्र सुख मिल्नेछ । कार्य लाभका साथै सुखद् यात्राका योग देखिन्छन् । व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ ।
वृश्चिक राशिः धातुजन्य वस्तु लाभदायी रहनेछन् । धार्मिक कार्यमा रुचि रहनुका साथै अध्ययन अध्यापानको क्षेत्र पनि सबल रहनेछ । मित्र सहयोगले दिन सार्थक बन्ने देखिन्छ ।
धनु राशिः व्ययमा वृद्धि हुनेछ । शत्रु पक्ष सबल रहनुका साथै कार्यमा पनि अस्थिरताले राज गर्न सक्ने देखिन्छ । आज जलीय वस्तु लाभदायी रहनेछन् ।
मकर राशिः पराक्रम बढ्नेछ । कला साहित्यका क्षेत्रमा रुचि रहनुका साथै कार्यप्रापितका योग पनि देखिन्छन् । भौतिक वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ ।
कुम्भ राशिः पारिवारिक सुख मिल्नेछ । आर्थिक उन्नतिका साथै व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ । लेखन कार्यमा विशेष अभिरुचि रहनेछ ।
मीन राशिः पारिवारिक सुख मिल्नेछ । आयमा वृद्धि हुनुका साथै सामाजिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ । कर्म क्षेत्र सबल रहने देखिन्छ ।
प्रकाशित समय ०४:०८ बजे
पछिल्लाे - सूर्य चिह्नमा आँखा नलगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चेतावनी : माधवकुमार
अघिल्लाे - अञ्जु पन्त र उत्तम खडकाको स्वरमा ‘मनै मनमा’ गीत सार्वजनिक